10 fahasamihafana lehibe eo amin'ny fanaovana fitiavana sy fanaovana firaisana - Fifandraisana
Raha manontany tena ianao hoe inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanaovana fitiavana olona iray sy fanaovana firaisana dia tonga amin'ny toerana mety ianao.
Mety tsy niara-natory tamin'ny olona maro ianao, na mety mbola tsy natory niaraka tamin'ny olona iray tena tianao tokoa, ka mety hahatsapa fikorontanana izany!
Misy fanontaniana lehibe azonao apetraka amin'ny tenanao raha ny amin'ny fiainam-piraisana sy ny olon-tianao.
Ireo dia hanampy anao hahafantatra raha manao ‘firaisana ara-nofo fotsiny ianao’ na raha mizara zavatra akaiky kokoa sy tena fitiavana.
1. Misy fihetseham-po tafiditra ao ve?
Betsaka ny olona no hatory amina olona tsy manana fitiavana amam-pitiavana teo aloha - na zavatra mamo izany, fifamatorana amina ‘sakaiza misy tombony,’ na firaisana ara-nofo amin’olona vao vao hitany.
Firaisana ara-nofo fotsiny izany - zavatra ara-batana ary eo ianareo roa hankafy ny tenanareo.
Ny fanaovana fitiavana kosa dia mifandraika kokoa amin'ny fifampizarana ny zavatra tsapanao amin'ny alàlan'ny fihetsika ara-batana.
Ny fifamatorana sy ny fahatsapana ho akaiky kokoa ny sakaizanao, ary fomba iray ara-batana hampitana ireo fahatsapana ireo amin'ny olona iray tena tianao.
Mety efa niresaka tamin'izy ireo momba ny fomba hanatonany anao akaiky ianao, na mety ho zavatra ataonao hanehoana fa tena miahy ianao.
2. Mahazatra sa mandeha irery?
Raha efa nihaona tamin'ity olona ity ianao indray mandeha, dia azo inoana fa firaisana ara-nofo fotsiny.
Angamba zavatra iray no niarahanareo tao amin'ny toe-tsaina tamin'ny fotoana nanamboarana haingana izay mety!
Mety hijoro iray alina na zavatra mamo miaraka amina namana akaiky io, saingy zavatra niseho tsy nisy prelude na eritreritra be akory.
Raha matory tsy tapaka amin'ny olona iray ianao dia misy vintana lehibe hifankatiavanareo.
Raha ny tena izy dia mifankahalala ny vatan'ny tsirairay sy ny faniriany ianao, ary momba ny fahafinaretana ifampiresahana hahafantatra bebe kokoa momba izay tian'ny hafa eo am-pandriana.
Tsy dia hoe resaka fitiavan-tena fotsiny ny fahazoana izay tadiavinao, ary bebe kokoa momba ny fahafinaretana akaiky ny vadinao.
3. Manokana ve?
Raha mifamatotra amin'ny olona isan-karazany ianao, na mahita olon-kafa ilay olona miara-matory aminao, dia mety hanao firaisana fotsiny ianao.
Mora kokoa ny matory manodidina rehefa tsy manana fahatsapana na iza na iza ianao. Tsy misy ny fahatsapana ho meloka na tsy fivadihana, amin'izay dia afaka mankafy ny tenanao fotsiny ianao - azo antoka, mazava ho azy!
RAHA irery ianao , dia satria samy mahatsapa ianao fa misy zavatra miavaka eo aminao izay zavatra tsy tianao zaraina amin'ny olon-kafa.
Raha mankahala ny fieritreretan'izy ireo mizara izany karazana firaiketam-po na fahafinaretana amin'ny olon-kafa izany ianao dia vintana ny fanaovana fitiavana ary nahazo fahatsapana ho azy ireo ianao.
Mety mahatsapa ny tena fomba mitovy aminao izy ireo raha toa ka izy ireo ihany koa no misafidy ny hizara an'ity traikefa ity aminao irery ihany.
4. Miandany ve sa malemy kokoa?
Raha ny firaisana ara-nofo hataonao dia samy mahazo izay tadiavinao ianao, matetika haingana araka izay azo atao, dia toa mihaona fotsiny ianao.
Ny 'firaisana ara-nofo' fotsiny dia matetika mahazo ny tadiavinao ary mankafy fotsiny ny lafiny ara-batana amin'ny zavatra. Mety tsy ho azonao antoka ilay olon-kafa ihany koa miala voly!
Raha samy manokana fotoana hianaranao ny momba azy ianareo ary ho malemy pa amin'ny samy izy, dia manao fitiavana.
Mety tsy dia maika loatra io, betsaka ny oroka sy firesaka tafiditra, ary mamy be noho ny manao firaisana ara-nofo fotsiny 'amin'ny olona tsy dia tsapanao.
Izy ireo angamba dia mifantoka kokoa amin'ny fahazoana antoka fa mahafinaritra anao koa, mifanohitra amin'ny fahazoana daka fotsiny!
5. Avelanao hitandrina ve ny mpiambina anao?
Rehefa manao firaisana tsy ara-dalàna amin'ny olona iray ianao dia mety tsy ho tena anao miaraka aminy.
Mety hanao firaisana tsara ianao, saingy tsy dia mamela ny tenanao ho marefo eo alohan'izy ireo.
Mety hitranga izany satria tsy matoky azy ireo tanteraka ianao na satria tsy vonona ny hizara an'io lafiny io amin'ny olon-kafa fotsiny ianao.
Raha mahatsapa ianao fa afaka mizaha lafin-javatra sasany amin'ny firaisana ara-nofo tsy nozarainao tamin'iza tamin'iza taloha, ary azonao atao ny mamela ny tenanao hankafy fotsiny izao fotoana izao, dia azo inoana kokoa ny manao fitiavana noho ny fanaovana firaisana fotsiny.
Matoky ny namanao ianao ary mahatsiaro ho voaro sy azo antoka amin'ny resaka fizarana ny vatanao sy ny sainao amin'izy ireo.
Mety ho hitanao fa matoky tena kokoa amin'ny vatanao eo alohan'izy ireo ianao, na mahatsapa ho faly kokoa ianao milaza aminy izay tadiavinao eo am-pandriana.
Na izany na tsy izany dia ho miaraka amin'izy ireo bebe kokoa ianao araka ny itiavanao azy ireo hahafantatra ny tena anao.
6. Mahatsapa ho feno fahafaham-po ve ianao?
Raha avelanao izy ireo hahatsapa fa nizara zavatra manokana ary avelanao hisy hahita lafiny miafina aminao, dia angamba nanao fitia tamin'olona tena tianao ianao.
Io haavon'ny fifandraisana akaiky ara-batana io dia manokatra fahafaham-po ara-pihetseham-po be lavitra noho ny fanao mahazatra. Mety hahatsapa ho voaro kokoa ianao amin'ny fifandraisanao, matoky tena kokoa amin'ny tenanao ary tiana kokoa ianao.
Raha nandany fotoana nahafinaritra fotsiny ianao ary nahatsapa ho afa-po amin'ny firaisana, dia izany ihany angamba. Handeha ianao hahatsapa afa-po, fa tsy amin'ny fitiavana!
Tsy hisy lolo, tsy hiantso ny BFF anao ianao hizara ny zavatra mamy nolazain'ny vadinao taminao, ary tsy handany fotoana hanonofinofy momba ny hatsaran-tarehin'izy ireo ianao.
7. Milaza ve ianao hoe ‘tiako ianao’?
Tsy mahagaga, anisan'ny fanaovana fitiavana amin'ny olona iray ny fizarana izany fahatsapana fitiavana izany!
Raha nilaza ianao hoe 'tiako ianao' rehefa matory miaraka amin'ny olona iray, dia satria mahatsapa izany ianao amin'ny fotoana.
Mety ho ilay milaza ireo teny kely majika 3 ireo ihany koa mitarika ianao dia ny mampifankatia azy ireo - tsy mila lazaina amin'ny hafanan'ny fotoana izany, mety ho ilay fehezan-teny izay mampiseho fa samy vonona hizara izany fahatsapana izany amin'ny lafiny iray ianao.
Raha manaraka ny lalan'ny resaka maloto ny fifampiresahana dia firaisana ara-nofo fotsiny!
8. Mampifandray anao akaiky ve izany?
Ny firaisana ara-nofo tsy dia mahazatra loatra fanahy betsaka ho an'ny olona voarohirohy, noho izany ny resaka fanentanana ara-batana kokoa noho ny zavatra hafa rehetra.
Mety tsy hahatsapa ho akaiky azy ireo ianao satria tsy mbola nizara zavatra marina, ankoatry ny vatanao, tamin'izy samy izy.
Ny fanaovana fitiavana kosa dia fomba fahatsapana ho akaiky kokoa ny vadinao (ara-batana, azo antoka, nefa ara-pihetseham-po koa!) Ary matetika dia marika mafy amin'ny fifandraisana tsara sy mahasalama.
Mety fomba iray hanehoana azy roa tonta tena mifampiahy aorian'ny ady, ohatra, na ny fifampahatsapana tsara aorian'ny andro ratsy. Na izany na tsy izany, io dia fomba iray hanamafisana ny fatorana sy ny fifandraisanareo.
9. Mihazakazaka ve ianao sa mandany fotoana?
Averina indray fa ny firaisana dia matetika amin'ny fahatsapana ho tsara sy ara-batana. Mety ho maika sy tsotra izy io - na inona na inona ilana azy roa tonta, raha ny tena izy!
Satria samy eo am-panaovana hook-up fotsiny ianareo dia tsy mila mifamitsy na mampiseho fa tena te handany ity fotoana ity miaraka.
Afaka miakatra fotsiny ianao, mahazo izay tadiavinao ary handeha eo…
Raha mandany fotoana bebe kokoa eo am-pandriana miaraka amina olona iray ianao ary tena mandany fotoana hijerena ny vatana sy ny saina, dia azo inoana kokoa fa manao fitiavana ianao.
Amin'ny alàlan'ny fihenana dia asehonao ny mpiara-miasa aminao fa te hanolo-tena ny fotoanao hamantatra izay tena tian'izy ireo!
Fomba iray hampahafantarana azy ireo fa eto ho azy ireo ianao, amin'ny izy ireo, ary te hizara ity fotoana ity ianao fa tsy maika hamakivaky azy fotsiny mba hahafahanao mahazo izay tadiavinao.
10. Mahatsiaro ho tantaram-pitiavana ve izany?
Matetika ny firaisana ara-nofo dia tsotra fotsiny amin'ny fahafinaretana - samy mifanintona ianareo ary mahatsapa tsara, koa maninona?
Na ianareo roa aza tsy hanao ezaka be hampahatsapa ho miavaka na mamy - ara-batana fotsiny izany, koa maninona no manelingelina, marina?
Ny fitiavana dia resaka tantaram-pitiavana avokoa - angamba misy labozia na akanjo anatiny mampidi-doza tafiditra amin'izany. Angamba ianao efa nandrandrana sy nisakafo tamin'ny fananganana hizara ity fotoana ity amin'ny tsirairay.
Na izany na tsy izany, raha samy mametraka ny toe-po sy mampiorina ny filana ianao dia mihoatra ny firaisana fotsiny. Mikarakara ny zavatra tsapan'ilay olona hafa ianao ary maniry azy ireo hahatsapa ho tsara momba ny tenany, hahatsapa ho voafitaka sy karakaraina.
Fomba 8 hilalaovana mafy hahazoana tsy hamonoana azy ireo
14 Famantarana ny fihenjanana ara-nofo tsapanao fa tena izy
Ahoana no fomba hamaranana ny sakaiza amin'ny fifandraisana mahasoa (fa mijanona ho mpinamana)
Antony 4 mahatonga anao hinamana ratsy eo am-pandriana (+ toro-hevitra 7 ho an'ny firaisana ara-nofo tsara kokoa)
braun strowman tsy vita miaraka aminao
ny fomba hahazoana fiainana vaovao
mametraka olona midina mba hahatsapa ho tsara teny nindramina
nandao ahy ny olona ho an'ny vehivavy hafa